BOOSAASO: Waa Siddee Muuqaalka Boosaaso 20 sano kaddib (Sawiro)
May 5, 2012 11:14 pm GMT - Written by PP - Edited by PP
Boosaaso: (pp)- Magaalada boosaaso oo ah xarrunta ganacsiga deegaanada Puntland ayaa 20 sano kaddib hormuud u noqotay magaalooyinka waaweynee ka jira dalka Soomaaliya, waxayna magaalada boosaaso uu kaboceedu uu si xoogan u bilowday wixii ka danbeeyey bur-burkii Soomaaliya kaddib.
Daawo Muuqaalka Magaalada Boosaaso
Ma’aha kaliya marka laga hadlaayo Puntland magaalada kaliya ee kobocday ee waxaa jira magaalooyin kale uu si xoogan u kobcay marka laga halayo dhismaha , boosaaso’e waxay number one ugu jirtaa magaalooyinka Puntland ee kobada dhanka walba ah gaartay.
2o sano kaddib waxaa madaxaaga ku soo dhaadhacaya boosaaso inay tartan la gelayso ama ka hormartay magaalooyinkii ay dowladihii hore ay hormariyeeen sida Kismaayo, Barbera, Xamar,waxaana soomaali badan ay isla qirsan tahay in magaalada boosaaso ay tahay meesha kaliya ee amarti ku noqdeen soomaaliweyn meel walba ay degan yihiin soomaaliya, taas oo keentay in horrumar aan laga sheekayn karin ay gaartay magaalada boosaaso.
Bal ku naaxayso sawirada, magaalo noocee ah ayaad aragtaa ? waa magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso oo 20 ssano kaddib ku talaabsatay horrumar aan laga sheekayn karin.
Hadaad hayso Sawiro xusuus ah oo ka turjumaya quruxda iyo nabadda ka jirta Puntland meel kasta aad ka joogto, kusoo aadi webmaster@puntlandpost.com ama Puntlandpost@hotmail.com